China Factory kpọmkwem ọkọnọ elu ikike 12v 200ah agm gel anyanwụ batrị emepụta na suppliers |Ndụ
Factory kpọmkwem ọkọnọ elu ikike 12v 200ah agm gel anyanwụ batrị
Ngwa: Ngwa ụlọ, Sistemụ ọkụ eletrik, Sistemụ Nchekwa Ike nke anyanwụ, Ọkụ na-adịghị akwụsị akwụsị, Batrị
Ogo batrị: 522*240*218mm
Nọmba nlereanya: 6-CNJ-200
Akwụkwọ ikike: afọ 3, afọ 2
Aha ika: LANYU ma ọ bụ OEM
Voltaji: 12V Batrị okirikiri miri emi
Ụdị batrị: Batrị Acid Lead
Ndụ imewe: 5-8 Afọ
Atụmatụ: Batrị okirikiri miri emi 12V
Ụdị: 12V 200ah batrị inverter
Mbupu: Oke osimiri
Deep okirikiri mmezi free gel batrị.Our ngwaahịa nwere ike iji na UPS, anyanwụ n'okporo ámá ìhè, anyanwụ usoro.
eserese nhazi ngwaahịa
(10 awa, 1.80V / cell)
Nchaji ugbu a
≤3% / ọnwa
Ụdị Nchaji (25 ℃)
Mbupu: -45 ℃ ~ 50 ℃
ụgwọ sere n'elu:
Ụgwọ n'elu mmiri: 2.275± 0.025V/cell
100% DOD 572 ugboro
Akwụ ụgwọ: -20 ℃ ~ 45 ℃
Oke okpomọkụ: ± 3mV / cell ℃
50% DOD 1422 ugboro
Nchekwa: -30 ℃ ~ 40 ℃
Ụgwọ okirikiri: 2.45± 0.05V/cell
30% DOD 2218 ugboro
Ọnụ ego akwụ ụgwọ okpomọkụ
Oge mwepu dị iche iche na njedebe dị iche iche Voltage, oge mwepụ (Amps,25)
Ọnụego mkpofu na-adị ugbu a (25℃, A)
Battery "lanyu", Mainte-nance n'efu ma dị mfe iji, nyocha na mmepe teknụzụ dị elu nke oge a
nke ọhụrụ elu-arụmọrụ batrị, Ọ nwere ike n'ọtụtụ ebe na-eji ike anyanwụ, ikuku ume, telekomunikashions usoro, offff-grid usoro, UPS na ndị ọzọ fifields.Ndụ emebere maka batrị ahụ nwere ike ịdị afọ asatọ maka iji float.
ISO9001 ISO14001 CE CGC TLC Asambodo Ngwaahịa Teknụzụ Ọhụrụ
IHE: Ihe data dị n'elu bụ nkezi ụkpụrụ, enwere ike nweta ya n'ime oge ụgwọ/nhapu.
Ndị a abụghị ụkpụrụ kacha nta.Ụdị cell na batrị / nkọwapụta ga-agbanwe agbanwena-enweghị ọkwa.
1).Kedu ụdị batrị ị ga-enye?
Anyị nwere abụọ ụdị batrị vrla: AGM batrị, agm miri okirikiri batrị na Gel batrị.There ọtụtụ dị iche iche nlereanya batrị ebe a, anyị nwere ike inye12v 100ah na 12v 150ah miri okirikiri batrị ọbụna 250ah batrị, na lithium batrị,12v 24Ah -130Ah.
2).Batrị gị nwere ike iru ihe CE RoHS chọrọ?
Batrị anyị dị na asambodo CE/RoHS.
3).Anyị nwere ike ịgbanwe agba dabere na nke mbụ?
Ee, agba nwere ike ịbụ ndị ahịa-mere dị ka gị chọrọ.
4).Ị nwere ike ibipụta foto m ma ọ bụ akara m na mkpuchi batrị?
Ee, OEM dị, anyị nwere ike ibipụta foto gị ma ọ bụ akara ngosi na igbe batrị, ma ị nwere ike ịnye akara ngosi gị.
5).Kedu ụdị nkwa ị na-enye?
Enwere ike iji ngwaahịa batrị anyị karịa afọ 3.Maka batrị okirikiri miri emi AGM oge akwụkwọ ikike anyị bụ ọnwa 13 na maka oge batrị GEL bụ afọ 3. Ọ bụrụ na ọ nwere nsogbu dị mma n'oge oge ikike anyị ga-agbanwe batrị ọhụrụ maka gị.
Otu katọn agba, otu pallet batrị kacha mma maka ike anyanwụ 12v 200ah okirikiri miri emi nwere ike ịchaji jel anyanwụ batrị
Ọnụọgụ(Iberibe) 1-100 >100
East.Oge (ụbọchị) 7 A ga-enwe mkparịta ụka
Nke gara aga: Sistemu anyanwụ 12V 120Ah Batrị anyanwụ
Osote: Usoro DNS
Ọnụ nke batrị anwụ maka ụlọ
Ọnụ ego batrị nke anyanwụ
Ngwọta batrị anwụ
12V 100ah Deepcycle Lead acid ma ọ bụ gel rechargeab ...
MONO-20W na PLOY-20W